Yaa Sameeyay Ururada Argagixisada? |
Qoraalkaan kooban waxaan si kooban ugu faaloonayaa ciddii sameeysay ururada argagixisada iyo cidda ka faa’iida ururada argagixisada ee dunida ku soo badanaaya maanta. Waxaan qoraalkaan si gaar ah ugu faaloonayaa ururada aadka loo hadal haayo waqtiyadaan dambe. Jabhadaan kalle duwan oo caalamka aad u war hayaan ee sheegtay in magac Islaamka u dagaalamaan sidda Al-shabaab, Alqaacida, Daacish (ISIS), Bako Haram iyo kuwa kalle oo daafaha caalamka maanta ka dagaalamaan. Aqristaha sharafta leh waxaan weydiisanayaa inuu maskaxdiisa ka shaqeysiiyo kana jawaabo su’aalahaan soo socda:
Yaa abuuray ama sameeyay ururadaan argagixisada ah?
Maxay tahay sawabta loo sameeyay?
Yeysa dan ugu jirtaa abuuritaanka ururadaan/jirintaankooda?
Waxaa macquul ah in dad badan aysan jawaabo u haynin su’aalahaas. Xaqiiqda sidda aan wada ogsoonahay waxaa jiro dhalinyaro badan oo ka tago qurbaha si ay ugu biiraan jabhadahaas ka dagaalamo gudaha wadamada Islaamka. Runtii dhammaan wadamada Islaamka maanta waxaa kajiro dhibaatooyin badan oo aan halkaan lagu soo koobi Karin. Si aan ugu jawaabno su’aalahaas aan kor kusoo xusay, waxaan sameeyay baaritaan koobaan oo aan ku eegaayo waxay yihiin uraradaan iyo cidda ay la shaqeeyaan. Waxaa jiro wadaado iyo culima udiin badan oo ka hadlay arimaha murugaysan ee ka taagan dalkeena iyo dhammaan dalalka Islaamka. Waxayna tilmaameen in dhammaan jabhadahaasi ay ku dhaqmaan caadooyin iyo dhaqamo xun xun oo ka soo horjeeda diinta Islaamka, waxaa dabargooyaan dhamaan dadka shicibka ah.
Mar ayey niyadeyda kusoo dhacday maxay tahay sawabta ay naftooda u halaagayaan? Maxaana keenay inay dadka xoog u sheegtaan? Xageyna ka helaan qarashkaan sidaan u xooga badan? Runtii xayawaanka xittaa wuxuu leeyahay caqli balse umma fakeraan sidda bini’aamka oo kale. Waxaan isku dayay inaan helo jawaabta su’aalahayga, waxana soo ogaaday in ay wada abuureen ururadaan sirdoonka Mareykanka, Yahuuda, iyo Ingiriiska, waxayna u sameeyeen dano dhaqaalle, mid Siyaasadeeda iyo mid diineedba. Sidda warbaahinta reer galbeedku ay sheegayso Abc news, The Insider, Bbc news iyo Global Research (Centre for Research on Globalization) sheegeen. waxaan isku dayayaa in qoraal kooban aan kasoo qaado warbaahinta qaar oo wax ka qortay arimaha ku saabsan xagjirnimada maanta baahsatay daafaha dunidda.
Sirdoonada dawladaha aynu kor ku soo sheegnay waxay ku caan yihiin dhammaan abuuridda dhibaatooyinka ugu badan ee ka jirta dunida maanta, hadaba ujeedooyinka loo abuuray argagixisada ayaa ah mid noocyo badan oo aan  halkaan kusoo koobi karin, balse hadii aynu ku horayno xagga dhaqaalaha si ay u helaan siliid bilaash ah. Dawladahaasi ayaa bariga dhexe loogu abuuray argagixisada, si ay shirakadaha hubka sameeya u helaan qandaasaadka hubka. Xagga siyaasadda si dadweynaha reer galbeedka loo maamulo waxaa laga maarmaan ah in loo sameeyo cadaawad, waayo waxaa hoos u dhacaya  wadajirka dawladaha reer galbeeda iyo dadkooduba. Xagga diinta si sumacadda iyo wanaag diinta Islaamka hoos loogu dhigo ayaa loo sameeyay waayo mudooyinkii ugu danbeeyay qaarada  Yurub ayaa ahayd  qaarada ugu badan ee dadku soo Islaamaan.
Waxaa kalle oo jirra qoraallo kalla duwan oo ay ka qoreen wakaaladaha reer galbeedka. Global Research (Centre for Research on Globalization) waxay qortay qoraal ay ugu magacdartay (America Created Al-Qaeda and the ISIS Terror Group) “Mareekanka wuxu abuuray Alqaacidda iyo ururka Islaamiga”
Iyagoo faah-faahin ka bixinaayo waxay yiraahdeen: ‘’America is using ISIS in three ways: to attack its enemies in the Middle East, to serve as a pretext for U.S. military intervention abroad, and at home to foment a manufactured domestic threat, used to justify the unprecedented expansion of invasive domestic surveillance.’’
“Mareykanka wuxuu isticmaalayaa ISIS saddex siyaabood: In ay weeraraan cadowgooda Bariga Dhexe, si ay ugu adeegsadaan mar-marsiisyada Mareykanka ee faragelin xagga milatariga dibadda, iyo in gudaha wadankooda lagu abuuro khatar, si loo helo qiil ballaarinta gelidda gudaha wadamadooda.”
Waxaa kalle oo jirra wakaaladaha kalla duwan ee reer galbeedka qorayaan sidda:
The Insider news article:
“CIA created al-Qaeda and gave $3 BILLION to Osama bin Laden”
“…..The US government trained, armed, funded and supported Osama bin Laden and his followers in Afghanistan during the cold war. With a huge investment of $3,000,000,000 (three billion US dollars), the CIA effectively created and nurtured bin Laden’s al-Qaeda terrorist network using American tax-payers money. Afghanistan is one of the world’s poorest countries, where such an enormous sum of money would have had extraordinary value.”
“CIA ayaa abuuray al-qaacidda oo siisay $3 bilyan Osama bin Laden”
“….Dowladda Maraykanka ayaa tababartay, hubaysay, heshay oo taageertay Osama bin Laden iyo xulafadiisa oo ku sugnaa Afganistan (Afghanistan) intii lagu jiray dagaalka qabow. Iyadoo maalgelin-weyn ee $ 3,000,000,000 (saddex bilyan oo doolarka Mareykanka), CIA ay si wax ku ool u abuurtay iyo waxa kobciya shabakad argagixiso Bin Laden ee Al-qaacida lana isticmaalayo lacagta canshuur bixiyahasha ee Maraykanka oo fa’iido leh. Afganistan waxay ka mid tahay wadamada aduunka ugu saboolsan, halkaas oo ah wadarta sidda weyn ee lacag badan oo qiimo leh keenayso.”
“… Bin Laden wuxuu ka tagay Sacuudi Carabia sanadkii 1979 si ay ulla dagaalamaan duulaankii Soofiyeetii ee Afganistan. Jihaadka Afganistan ayaa lagu taageeray doolarka Maraykanka oo lahaa barakada dowladaha Sacudiga Carabiya iyo Pakistaan. Waxa uu helay tababarka ammaanka CIA naftigeeda. “
ABC News maqaal:
“Gudaha sanadkii 1980, bin Laden wuxuu ka tagay gurigiisa raaxada Sacuudi ee Afghanistan si ay ugu qayb galaan. Jihadka Afganistan, ama dagaal qudduus ah, oo loogu soo horjeedo soo duulimaadkii Ciidamada Midowga Soofiyiinta – sababtoo ah, Waxaase xusid mudan, in Maraykanka maalgeliyay, ku shubtay, $ 3 bilyan iska caabinno ay Afganitanka ay bixinayso CIA. “
Dhamaan jabhadahaasi waxay ku dhaqmaan caadooyin iyo dhaqamo xun-xun oo ka soo horjeeda diinta Islaamka, waxay dabargooyaan dhammaan dadka shicibka ah, waxaan la arag dagaal weyn oo ay ku qaadeen dawladaha gaalada ah, sida ISIS ama Daacish waxaa dhawr talaabo u jiraan dawlada Yuhuuda, balse lama arag wax dhibaato ah oo ay u gaysteen. Waxay dhibaatooyinka u gaystaan waa dadka masaakiinta kunool deegaanadaas. Dhaqanada iyo caadooyinka ay ku dhaqmaan jabhadani ayaa ah kuwo cadayn u ah siday uga fogyihiin diinta Islaamka.
Edward Snowden oo ah nin la shaqayni jiray sirdoonka Maraykanka, qaybta Hay’adda Ammaanka Qaranka “National Security Agency” (NSA) ayaa waxaa uu sheegay “in sirdoonada Maraykan, Yuhuuda, iyo Ingiriiska ay mudo dheer qorsheeyeen samaynta ISIS ama Daacish, waayo waxay ugu talo galeen in la sameeyo cadaw u dhaw dalka Yuhuuda, si ay caawimada dawladaha reer galbeedka siiyaan Yuhuuda u joogsan. Waxaa kalle oo ay u sameeyeen si ay u xadaan siliida kujirta barigga dhexe. Waxay taas cadaynaysaa in ISIS ama Daacish maalintii iibiyaan in ka badan 25,000 barmiil oo saliid ah, oo waxay ka helaan dhaqaalle gaaraya illaa 1.2 Milyan oo Dollarka Maraykanka.
Waxaa kallee oo Snowden sheegay in hogaamiyaha Daacish ama ISIS ee Abubakar Al- Baqdaadi ay tababaro ay siiyeen sirdoonka Yuhuuda siddoo kalle, wargeyska Telegraph ee ka soo baxa dalka Ingiriiska waxa uu qormo uu kaga sheekaynayo Abu Bakar Al Baqdaadi sheegay in qabsashadii Maraykan ee Ciraaq ka horre uu ahaa macalin jaamacadeed, 2004 ayaa la xiray dibna loo ma arag illaa 2014 ka hor. Waxaa xilligaan sheegtay in Al-qaacida Ciraaq ay u dooratay in uu noqdo Amiirka Muumin. Hadaba mudada la wayay waxaa la sheegay in sirdoonka Yuhuudu tababaro siiyeen Abubakar Al Baqdaadi.
Jabhadaha argagixisadu waxay isticmaalaan qalabyo aad u horumarsan, waxay haystaan hub noocyada ugu casrisan, waxay qabaan tababarada ugu wanaagsan ee sirdoonada la siiyo. Waxay leeyihiin shabakad sirdoon ah oo meelo badan joogaan. Waxaa isweydiin mudan, jabhadaha dunida oo dhan raadsato ama ka mamnuuca ah, siday u heli karaan waxaan oo dhan, ha noqoto hub casri ah oo ay ku dagaalamaan mise qarashaadka kalle oo iyaga ku baxa?
Waxaa caalamka maanta aynu joogno ka jirto dhibaatooyin badan sidda diin naceybka, sinaan la’aan dhaqaalaha iyo waxyaabo kalle oo tiro badan balse aan fahmi karno waxa keenay arimahaan murugsan ee ka taagan caalamkaan cusub. Wakaaladaha wararka ayaa ka mid ah kuwa dadka sii nacsiiyo diimaha kuwaasoo xumaan badan ka sheego diinta Islaamka. Wadankeena waxaa ka jiro dhibaatooyin badan oo ay kalla yihin mid qabyaaladeed, mid siyaasadeed iyo mid diimeedba. Balse dhibaatooyinka ka jiro wadamadaan oo dhan siddii ay ugu bixi lahaayeen waxay u taallaa muwaadiniinta u dhashay dalalkaas.
Tags: argagizisadaYaa sameeyay ururada argagaxisada
Next post Yurub Iyo Faca Jihaad Doonka Ah
Previous post Maxaad Ka Taqanaa Bariis Isku Karis Soomaaliyeed?